့URGENT NEWS | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News »့့URGENT NEWS
Posted by fatty on Nov 17, 2010 in News |7comments
ကျောက်တံတားမြို့နယ် အင်တာနက်ဆိုင်တွင် ယခု ဗုံးများတွေ့သောကြောင့် ရန်ကုန်ရှိ internet ဆိုင်များချက်ချင်းပိတ်ရန်အမိန့်ထုတ်သည်။ အမိန့်ရချိန် ည ၈ နာရီ
ဟုတ်လား.. ဦးဖတ်တီး.. ဘယ်ဆိုင်လဲ.. လူတွေထိသေးလား????
အညာနွေ တမာမြေမှ …
ဒီနေ့ညနေ ရန်ကုန်မြို့ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ဘားလမ်းထဲမှာရှိတဲ့ စီတီးဟော်တယ်က အင်တာနက်ဆိုင်မှာ ဗုံးတွေ့လို့ လုံခြုံရေးတွေရှုတ်ရှက်ခတ်နေပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ရဲတွေ စစ်သားတွေ စရဖတွေ ထောက်လှမ်းရေးတွေ ခြေရှုတ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဗုံးက မကွဲသေးလို့တော်သေးတာပေါ့
ကြည့်နေနောက် ဒါမျိုးတွေများကြီး လာအုံးမှာ..
အခု လူတွေက ဒေါ်စုလွတ်လာတော့ လူတွေက နိုင်ငံရေးမှာ အရင်ကထက် ပိုပြီးရဲရင့်လာကြပြီ။ နိုင်ငံရေးစိတ်နိုးကြားလာကြပြီပေါ့။ ဒီတော့ အစိုးရက ဟိုနားဗုံးတွေတယ်။ ဒီနား ဗုံးပေါက်တယ်။ နိုင်ငံက မငြိမ်သက်ဘူး ဘာဘူးလျှောက်သြော်မယ်။ ပြီးတော့ ဟိုအဖွဲ့ စွတ်စွဲ ဒီအဖွဲ့စွတ်စွဲလုပ်မယ်။ ပြီးရင် NLD ကို လက်ညိုးထိုးမယ်။ ပြီးတော့ ဒါတွေဟာ ဒေါ်စု တရားခံ သူ့လွတ်လာလို့ ဒီလိုဖြစ်တယ်။ ဘာညာပြောမယ်။ နောက် ဆွဲ စိလိုက်မယ်။ ဒါ အခုမှ အစဘဲရှိသေးတယ်။
မောင်သန်းရွှေရေ…. မင်းအကွက်တွေက ရိုးသွားပြီကွာ…
မန်းသားလေး ကမင်္သခ ရဲ့သင်တန်းကိုဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်
စီးတီးဟော်တယ်က ဆိုင်ဆိုတော့ မြို့တော်ခန်းမအနောက်ဖက်ပေါ့။ကြောက်ကြ
အော ဒါကြောင့်ကိုး မနေ့က ညဘက် ဆယ်နာရီကျော်တာတောင် လသာအပေါ်ဘလောက်မှတ်တိုင်နားမှာ ကားတွေလိုက်စစ်နေတာ … ။ ဗုံးဆိုတာကလည်း ဘယ်သူတွေလက်ထဲမှာရှိလဲသိတယ်မို့လား ။ အန်တီစု ထွက်လာတော့ ပြန်ဖမ်းချင်လို့ ဂွင်တွေဆင်နေတာနေမှာပေါ့ ။